Waxa dad burburka u yaqaan dad buu baraare u yahay, tusaale kooban: Maanta Hargeysa toban jibbaar bey ballaaratay, dadkii u dhashayna waa ka taliyaan. 1980kii ka hor guryaha Bosaaso waxay ahaayeen wax ka yar boqol cariish, maantana jaamacado iyo fooqaq isku qoofalan ayaa laga dhisay. Warbaahinta Soomaalida waxaan ka maqlay Jaamacad Saxaafadda lagu barto ayaa Buhoodle laga hirgeliyey. Raxanweyn dagaalkii RRA kadib shirkii Carta-Jabuuti sed Libaax baa la siiyey oo saamigeeda waxaa lala simay beelaha kale. 1950kii reer Baydhabo waxay rabeen FEDERAL, reer Boosaaso waxay rabeen MAAMUL DHEXE oo mideysan. 50 sano kadib reer Bosaaso waxay doonayaan FEDERAL, reer Baydhabo waxay u janjeeraan MAAMUL DHEXE oo mideysan, isbeddelkaasi wuxuu ka dhashay dagaalladii sokeeye Baydhabo waa duntay, Bosaaso cusubna way dhisantay.
Habdhaqanka Idaajaa wuxuu ka turjumeysaa cadaaladdarradii iyo xishood la’aantii adeerki Siyaad Barre 21kii sano ee Kacaankii Luggooyo Soomaalida wax ugu qeybiyey ee ku biyoshubatay (65 Jineraal Daarood iyo 8 Jineraal Isaaq. 13 Safiir Dhulbahante iyo 1 Abgaal. 10 G/Sare oo wada dhashay ilma Jaamac Gurey. 1990kii Safiirrada Isaaq iyo Dashiishle waa isla ekaayeen oo waxay kala ahaayeen Xuseen M. Bulaale oo joogay Turkia iyo Axmed Shire Maxamuud oo joogay East Germany. Qoraalkan oo faahfaahsan waxaad ka heli kartaa buugga Sababihii Burburka Soomaaliya, bogagga kala ah: 81/82, 147/150, 158/166). Bahal ceeriin ma daayo ninna caadadi ma baajo. Baydari biciid qashay ayaa deriskii siiyey madaxii, waase saluugeen, Baydarigii oo la yaabban sida ay u qawadeen qeybta wanaagsan ayaa ku yiri deriski “haddaan idin siiyey: labadii ursheen iyo labadii maqleen iyo arkeen, dhaydhaylihii iyo dhanxanaggii dhambasha la’ekaa, maskaxdii moolka ka buuxday iyo maqaarkii madaxa, maxaa idinka maqan?).
Sida cadaaladda iyo hufnaanta ah ee Axmed Idaajaa suugaan-yahanka Soomaaliyeed wax ugu qeybiyey malaha wuxuu ka hidde-raacay wax qeybintii Baydariga. Xishood la’aanta iyo gaboodfalka Siyaad Barre iyo Axmed Idaajaa waa dhaqan guud oo ay ka hidde raaceen tolweynaha ay ku abtirsadaan. Maamuus iyo sharaf, manfac iyo madaxtinimo, wax walba aniga ayaa mudan waa mushkilad marax xun laga dhaxlo. Dib u eeg sooyaalka Soomaaliya, madaxdii hirgelisay cadaaladarada, qabyaaladda qaawan iyo kadeedka ummadda, waxay ku dambeeyeen khaatumo xumo, iyagoo qoomameynaya ayey qaxooti ku dhinteen (Sayid Maxamed, MSBarre & Cabdullaahi Yuusuf) goobtey ku geeriyoodeen iyo guuldarradii ku dhacday, yaan la illoobin. Qofkii hadimo abuura hubaal isagaa halisteeda hela.
Soomaalida geeska Afrika deggan ee Idaajaa marinhabaabiyey hadday madaxa VOA laanta afka Soomalida weydiiyaan xeerka waajib nooga dhigay inaan dhegeysano tororogta Idaajaa xaggee laga tixraacay? Ma beelaha kale ayaan lahayn gabyaa iyo suugaanyahan? Taariikhda maansada Soomaaliyeed ma Raage Ugaas bey kasoo bilaabataa? Maxaa kallifey in maskaxda ummadda Soomaaliyeed lagu majara-habaabiyo suugaan beeleed bogga ka raran iyo in lagu beero taariikh been-abuur ah? Madaxa VOA muxuu kaga jawaabi doonaa? Ma qiyaasi karo jawaabtiisa, waxayse u dhowdahay “nin dharbaaxyo quureed dugsaday dhaqayadeed maal. Indha Low ku yaal ma arkaan addinkood. Qalbi laawe Qur’aan lama baro. Aragti gaaban idahaa ku luma. Doqoni dubaax iyo dareen midna maleh”. Gaboodfalkii gulufkii dooxatadii daraawiishta (Shabaabkii waagaas) nin gocanaya ayaa loo sheegay geerida ina-Cabdulle Xasan, markaas buu isagoo faraxsan yiri “Waatey Alleba kala go’een gooshigii hore’e -- sidee buu Aakhiro ugu galbaday doqonsanaa Gaalku!”. Madaxa VOA-Somali oo 1980-yadii ka shaqeyn jirey Warfaafinta Soomaaliya, malaha weli waxaa hortaagan tookhii ahaa “halkani waa Radio Muqdisho codka beesha hubeysan iyo gabay Nugaali lalama karo guurow Cadale” wuxuuse mooggan yahay beelaha Soomaaliyeed inay maanta wada hubeysan yihiin oo ay kala xoroobeen. Waxaa kaloo jiri karta garasho la’aan iyo aragti gaaban. Xayawaanka loo yaqaan “Qarandi” maalin iyo habeen markasta waa fooraraa, wuxuuna dayax arkaa habeenka 15aad markaas buu yiraah “bileey bil caanood araggaagu waa noo abshir”.